रहेनन् पूर्वमन्त्री आलम, हृदयाघातका कारण ज्यान गएपछि ओलीले निकाले यस्तो विज्ञप्ति — Sanchar Kendra
१भूमि आयोग विघटनको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
२मध्य भोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँट
३थप १२८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ७ को मृत्यु
४दुर्घटनाबाट जोगिएको बुद्ध एयरको विमानबारे सरकारले छानबिन गर्ने
५दक्षिण कोरियामा ह्वात्तै बढ्यो फेरि कोरोना संक्रमण
६७३ अंकले घट्यो नेप्से, सेयर बजारमा पहिरो
७प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्म स्थगित
८झन्डै दुर्घटनाबाट बचेको विमानमा सवार यात्रुको बयान- जहाजभित्रै रुवाबासी चल्यो,आश मारिसकेका थियौँ
९चितवनका सात स्थानीय तहमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व
१०विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौं फर्किएको जहाजमा के भएको थियो ?
११माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?
१२काठमाडौँबाट विराटनगरका उडेको ७३ जना यात्रु सवार विमान अन्तै पुग्यो
रहेनन् पूर्वमन्त्री आलम, हृदयाघातका कारण ज्यान गएपछि ओलीले निकाले यस्तो विज्ञप्ति
पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री मोहम्मद मुस्ताक आलमको निधन भएको छ । बिहीबार गृहजिल्ला रौतहट गएको बेला हृदयाघात भएका आलमको बाँसबारीस्थित शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग अस्पतालमा उपचारको क्रममा शुक्रबार साँझ निधन भएको हो ।
त्यसलगत्तै उनलाई उपचार गर्न बाँसबारीस्थित गंगालाल अस्पताल पुर्याइएको थियो । ५३ वर्षीय आलमको पार्थिव शरीरलाई शनिबार विहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा राखिने नेकपाले जनाएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शोक वक्तव्‍य जारी गर्दै मो.मुस्ताक आलमको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । आलमको निधनबाट पार्टीले मुस्लिम समुदायबाट उदाएको एउटा असल नेता गुमाउनु परेको ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले आलमप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन् । यसअघि उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न शुक्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री ओली गंगालाल समेत पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री फर्केको केही समय पछि नै चिकित्सकरुले उनको आलमको मृत्यु भएको घोषणा गरेका थिए ।
आलम केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ साउनसम्म स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिवेला उनी विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा थिए ।
गत मंसिरमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा भने आलम नेकपा प्रवेश गरे । उनी रौतहट क्षेत्रनम्बर २ बाट वाम गठबन्धनबाट चुनाव लडेका थिए तर, उनी निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।
२०७५ असार ३० मा प्रकाशित ।